कामिनीले मन्त्रीलाई किन बुझाइन् २ करोड ? - ebudhabar.com - Different taste of news, views & analysis.
कामिनीले मन्त्रीलाई किन बुझाइन् २ करोड ?
काठमाडौं । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतलाई खुसी पार्नका लागि नेपाल टेलिकमले २ करोड रुपैयाँ चुनावी खर्च बुझाएको बताइएको छ । वाम गठबन्धनको प्रभावका कारण सिन्धुपाल्चोकबाट पराजयको संकेत पाएसँगै आगामी चुनावमा पैसाकै खोलो बगाउने योजनाअनुसार मन्त्री बस्नेतले टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक कामिनी राजभण्डारीमार्फत २ करोड बुझेको उच्च स्रोतले दाबी गरेको छ ।
त्यति मात्र होइन, सिन्धुपाल्चोकको चुनावी अभियानमा निर्वाचन आचारसंहिताको व्यापक धज्जी उडाउनुका साथै दर्जनौं संख्यामा टेलिकममा गाडीहरूको दुरुपयोग भएको बताइएको छ । मन्त्री बस्नेतले चुनावी खर्चका नाममा नेपाल टेलिकमका कर्मचारी उच्च तहका कर्मचारी, प्रबन्ध निर्देशक र केही व्यापारीहरूसँग समन्वय गरेर २ करोड ल्याइदिनू भनेर निर्देशन दिएका आधारमा कामिनीले २ करोड बुझाएको बताइएको छ । मन्त्रीले चुनाव आएको र खर्च प्रशस्तै लाग्ने भन्दै २ करोड रुपैयाँ सहयोगको प्रबन्ध मिलाउन टेलिकमकी प्रबन्ध निर्देशक कामिनी राजभण्डारीलाई निर्देशन दिएका थिए । केही समय त के गर्ने होला भनेर अलमलमा परेकी प्रबन्ध निर्देशक भण्डारी अर्का घुस्याहा प्रबन्धक गजेन्द्र ठाकुरको परामर्शपछि मन्त्री बस्नेतलाई २ करोड रकम बुझाउन राजी भएकी थिइन् । ‘सुरुमा त राजभण्डारीले यति धेरै रकम मैले कसरी दिने भन्दै आफूले सहयोग गर्न असमर्थ रहेको जनाउ दिएकी थिइन्, तर सबैसँग उठाएर दिन सकिने ठाकुरको सुझावपछि उनले मन्त्रीको मान्छेलाई पैसा पठाइदिइन्,’ टेलिकम स्रोतले भन्यो ।
मन्त्री बस्नेतबाट दबाब आएपछि पछि अप्ठेरो पर्ने ठानेर उनले मागेको आर्थिक सहयोग प्रदान गरिएको बताइएको छ । यता मन्त्रीका लागि केही अभाव नगर्नू भन्दै उनले केन्द्रीय कार्यालय र जिल्ला शाखाहरूबाट चाहिएजति सरकारी गाडी पठाउने गरिएको बताइएको छ । सो कुुराको टेलिकमका कांग्रेस निकटका कर्मचारीबाहेक अन्यले समर्थन गरेका छैनन् । मन्त्री बस्नेतले मनोनयनका दिनदेखि यताका हरेक दिनजसो सबैतिर गरी करिब तीन दर्जन सवारीसाधन प्रयोग गरिरहेको बताइएको छ । सिन्धुपाल्चोकका प्रचारमा हिँड्ने कांग्रेसी कार्यकर्ताहरू पनि ‘मोहन दाइले पैसाको परवाह नगर्नू, जसरी पनि जित्नुपर्छ’ भनेको भन्दै मस्तीका साथ प्रचारमा हिँडेको बताइन्छ । त्यहाँ कार्यकर्ताहरूले नै ‘टेलिकमको पैसा छ, हामीलाई केको दुःख छ ?’ भन्ने नारा नै बेलुका थकाइ मार्ने बेलामा आन्तरिक रूपमा लगाउने गरेको एक कार्यकर्ताले नाम नबताउने सर्तमा जानकारी दिए ।
के छ गाडी दिने प्रावधान ?
विभिन्न किसिमका लक्जरीदेखि मध्यम खालका गाडीहरू नेपाल टेलिकमसँग रहेको छ । त्यसका हाकिमहरूले मन्त्री, सचिव वा अन्य उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूलाई चाकडी गर्नुपरेको खण्डमा पर्याप्त तेलसमेत हालिदिएर गाडी चालकसहित पठाइदिने चलन नौलो होइन ।
पावरदार व्यक्तिले भनिसकेपछि कागजी प्रक्रिया मिलाएर तुरुन्त गाडी पठाइदिने र आफूहरू निरीह हुने गरेको एक कर्मचारीले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा बताए । उनले सिन्धुपाल्चोकमा गाडी दुरुपयोग भएको स्विकार्दै मन्त्रालयको प्रयोगका लागि आवश्यक भन्दै मन्त्रालयबाट चिठी लिएर आएपछि र एमडीले तोक लगाएपछि आफूहरूले रोक्न नमिल्ने जानकारी दिए । उनले यसमा आफ्नो संलग्नता नभई एमडीकै आदेशमा आफूहरूले काम गरेको बताए । गाडीसम्बन्धी हेर्ने काम भने निर्धर भट्टराईले गर्दै आएका छन् ।
प्रबन्ध निर्देशक राजभण्डारी र प्रबन्धक ठाकुरले टेलिकममा अर्बौं रुपैयाँको भ्रष्टाचार गरिरहेको टेलिकमका कर्मचारीको आरोप छ । राजभण्डारी र ठाकुरले फोरजी सेवा सञ्चालन र अन्य अनेकौं प्रोजेक्ट तथा टेन्डरमा खुला भ्रष्टाचार गरेको टेलिकमकै कर्मचारीहरूले खुलासा गरेका छन् ।
थ्रीजीका उपकरण तथा पुरानै टावर प्रयोग गरेर फोरजी सेवा सञ्चालन गरेको प्रचारप्रसार गरेर १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ खर्च गरिएको छ । यसको सूक्ष्म छानबिन गरिए १ अर्बभन्दा बढीको भ्रष्टाचार गरिएको स्पष्ट हुने स्रोतको दाबी छ ।
यता प्रबन्ध निर्देशक राजभण्डारीले भने आफूलाई मन्त्रीले कुनै पनि आर्थिक सहायता र गाडीका लागि दबाब नदिएको बताइन् । उनले बुधबार प्रतिनिधिसँग भनिन्, ‘मन्त्रीज्यूले त्यस्तो केही भन्नुभएको छैन, मिलाएर लेखिदिनुहोला ।’
स्मरणीय छ, उनले फोरजीमा गरेको घोटाला र टेलिकममा रहँदा गरेको गैरकानुनी आर्जनबारे अख्तियारले छानबिन गरेको र मुद्दा चलाउने अन्तिम तयारी गरेको छ । बयानका लागि उनी यसअघि नै पुगिसकेकी थिइन् ।